घरमा राख्नुस् यी ५ बिरुवा, प्राप्त हुनेछ सकारात्मक ऊर्जा
स्वास्थ्य घरमा राख्नुस् यी ५ बिरुवा, प्राप्त हुनेछ सकारात्मक ऊर्जा
Nepal Online Patrika: सकारात्मक ऊर्जाको हामी सबैलाई आवश्यकता हुन्छ ।
आफ्नो आसपासमा सकारात्मक बनाइराख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जीको माहोल बन्न सकोस् अनि सबै नकारात्मक ऊर्जा हामीबाट टाढा जाओस् ।
सकारात्मक ऊर्जाका लागि केही केही बिरुवाले पनि साथ दिने गर्छन्।
हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बोट–बिरुवा छन्, जसले हामीलाई ऊर्जावान बन्न मद्दत गर्छन् ।
तुलसी: तुलसी स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै गुणकारी वस्तु हो । यो गुणकारी बिरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक ऊर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ ।
मेहन्दी:सकारात्मक ऊर्जाका लागि शरीर तथा मन चुस्त र दुरुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । शरीर र मनको थकानलाई टाढा गर्न लागि मेहन्दी निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो बिरुवा घरमा राख्दा निन्द्रको समस्या समेत अन्त्य हुन्छ ।
मनिप्लान्ट: घरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुनेछ । यस बिरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ ।
घ्यूकुमारी: शरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्त्व छ तर के तपाईंलाई घरमा रहेको नकारात्म ऊर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्त्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छ ?
बाँस: ​बेम्बो ट्रीले भाग्य तथा प्यारयुक्त अवस्था बनाइराख्नका लागि सहयाता गर्छ । यो सानो खालको बाँसलाई खासै हेरचाहको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
सानो शिशाको भाँडोमा थोरै पानी रखेर एक कुनामा यसलाई राख्न सकिन्छ ।
स्व’स्थ रहनको लागि दिनभरीमा ८ देखि ९ गिलास पानी पि’उन आवश्यक छ । चिसो मौसममा हल्का मनता’तो पानी नै पिउनु फाइदाजनक हुने वि’शेषज्ञहरु बताउँछन् ।
छा’तीमा क’फ ज’मेर भित्र भित्रै थाहा नै नभई हुनसक्छ नि’मोनिया। घरेलु उ’पचार
कविता - November 23, 2020 0
अहिले स्वा’स्थ्यमा कुनै स’मस्या देखिए धेरैलाई चि’न्ता हुन्छ, को’रोना त होइन । तर, मौ’सम बद्लिने यो समयमा सामन्य स्वा’स्थ्य स’मस्या देखापर्छ । कसैलाई रु’घा लाग्ने, खो’की लाग्ने, ज्व’रो आउने, क’फ ज’म्ने, जो’र्नी दुख्ने आदि ।
केही लक्षण नआइ सिधै ढलाउन्छ प्रेसर लो भयो भने।यस्ता कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनुहोस नत्र जे पनि हुन सक्छ।ढिला नहुँदै यस्ता उपाय अपनाउनुहोस
कविता - November 21, 2020 0
ब्लड प्रेसर लो भएका बिरामीहरुले आफ्नो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । खानपानमार्फत नै यसलाई सामान्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।
‘अहिले ज्वरो ९९ मात्रै छ, तपाईंको पैसा लाग्छ’
कविता - November 20, 2020 0
‘पीसीआर टेस्ट गराउने कता हो सिस्टर ?’ टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको फ्रन्ट डेस्कमा बसेकी स्वास्थ्यकर्मीसँग एक युवतीले सोधिन् ।
टिकटकबाट चर्चा कमाएकी रेश्माको मन नै लोवाउने क्युट तस्विरहरु
कविता - December 2, 2020 0
टिकटक भिडियोमार्फत चर्चामा आएकी रेश्मा घिमिरेले एउटा फिल्म पनि खेलेकी थिइन् ।
यस्ता नियम पालना गरेर अब पुष १ गते देखि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न पाइन्छ
कविता - December 1, 2020 0
रचना रिमाल ठुलो तनावमा । किन रुदै आईन् ? मु’द्धा हाल्छु...